Ciidamada Al Shabaab Oo Gudaha Ugalay Magaalooyinka Qansaxdheere iyo Jalalaqsi iyo Dagaallo Dhacay.
Tuesday February 06, 2018 - 07:51:37 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobollada Bay iyo Bakool ayaa sheegaya in dagaallo culus ay xalay saqdii dhexe ku dhaxmareen ciidamada xabashida Itoobiya iyo xoogaga Xarakada Al Shabaab
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada muslimiinta ay dhowr jiho ka weerareen saldhigyada ciidamada Itoobiya iyo Maleeshiyaadka Maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan degmada Qansaxdheere ee gobolka Bay.
Dagaal muddo saacad iyo bar ah socday ayaa xalay saqdii dhexe ka dhacay degmada Qansaxdheere,dadka deegaanka ayaa sheegay in rasaas xooggan iyo madaafiic ay isdhaafsanayeen labada dhinac laga maqlayay gudaha degmada iyo hareeraheeda.
Idaacadda Andalus ee Afka Xarakada Al Shabaab ku hadasha ayaa sheegtay in ciidamada mujaahidiinta ay la wareegeen dhowr difaac oo maleeshiyaadka maamulka Shariif Sakiin uga sugnaayeen Qansaxdheere balse markii dambe ay dib uga gurteen.
Ciidamada Itoobiya oo xalay weerar xooggan la kulmay ayaa la sheegay in ay madaafiic ku garaaceen gudaha Qansaxdheere balse illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkii xalay dhacay.
Dhinaca kale ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa xalay gudaha ugalay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan halkaas oo ay kula dagaallameen maleeshiyaad katirsan Dowladda Federaalka.
Wararka laga helayo gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in weerarka lagu beegsaday guri uu deganaa madaxa canshuuraha degmada Jalalaqsi, dagaal muddo socday kadib ayay xoogaga Al Shabaab usuurtagashay in ay galaan guriga weerarku ka dhacay waxaana iska hor'imaadka lagu dilay mid kamida ciidamada ilaalada u ah madaxa canshuur qaadista balse lama oga xaaladda mas'uulka la weeraray.
Weerarka ayaa ka dhacay Bariga degmada Jalalaqsi ciidamada Jabuuti ee saldhigyada ku leh magaalada wax gurmad ah uma fidin mas'uulka Canshuuraha ee ee laweeraray, ma ahan markii ugu horraysay oo iska hor'imaadyo ay ka dhacaan degmada Jalalaqsi, xoogaga Al Shabaab ayaa xilliyada habeenkii howlgallo ka fuliya magaalooyinka gacanta ciidamada shisheeye kujira.